ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အထီးကျန်ခြင်း - ဘက်လိုက်မှုဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်မှုပုံစံနှင့်ရှေ့ပြေးစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း (၂၀၁၇) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်တွင်
J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther ။ 2017 ဧပြီ 27:0။ Doi: 10.1080 / 0092623X.2017.1321601 ။
ဘတ္ MH1, Pereyra လုပ် SA1, Draper TW1, Leonhardt ND1, Skinner KB2.
လိင်သည်လူသားနှင့်သက်ဆိုင်သောဆက်နွယ်မှု၏အားကောင်းသောအဓိကဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်ဝက်၏နည်းပညာတိုးတက်မှုများကြောင့်မီဒီယာသည်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်လွှမ်းမိုးမှုရှိစေပြီး၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူများကိုပါထည့်သွင်းထားသည်။ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်သော scripting နှင့်စွဲလမ်းစေသောအလားအလာများအရညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောကြောင့်သီအိုရီအရ၊ Empire, ကျွန်တော်တစ်ဦးတိုင်းတာခြင်းမော်ဒယ်နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်အထီးကျန်အသီးသီးတစ်ဦးချင်းစီကတခြားအပေါ် regressed ရာနှစ်ခုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်များကို အသုံးပြု. ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်အထီးကျန်အကြား The Associated သဘောသဘာဝဆန်းစစ်။
စစ်တမ်း data တွေကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအပေါ်မေးခွန်းများ, Los Angeles မြို့အထီးကျန်ခြင်းစကေး (UCLALS) ၏တက္ကသိုလ်နှင့်အခြားလူဦးရေအချိုးအစား variable တွေကိုပါဝင်တဲ့အွန်လိုင်းမှမေးခွန်းလွှာပြီးစီးခဲ့သောသူ 1,247 သင်တန်းသားများ၏နမူနာအနေဖြင့်စုဆောင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကနေရလဒ်တွေကိုအားလုံးသုံးမော်ဒယ်များများအတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်အထီးကျန်အကြားသိသာထင်ရှားသောနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်အသင်းအဖွဲ့များဖော်ပြခဲ့တယ်။
တွေ့ရှိချက်များကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်အထီးကျန်ဆန်ကြားရှိဆက်ဆံရေးဖြစ်နိုင်သမျှအနာဂတ် bi-directional, request ကိုမော်ဒယ်အဘို့အခိုင်ခိုင်လုံလုံသည်။
KEYWORDS: အမူအကျင့်စွဲမော်ဒယ်; အထီးကျန်; ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်း, ဇာတ်ညွှန်းသီအိုရီ